घरैवाट भर्न सकिन्छ डिभी चिठ्ठा | मेरो कलम
– नेपाली युवाको मन मष्तिष्कमा अहिल्य एउटै विषयले डेरा जमाएको छ त्यो हो (ELECTRONIC DIVERSITY VISA) डिभी चिठ्ठा । साधारण व्यक्तिदेखी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले समेत अमेरिका जाने सपना वोकेर डिभी चिठ्ठा भर्ने गरेका छन् । यहि डिभीको नाममा बजारमा धेरै सघंसस्थाले अहिल्य नै पैसा कमाउने समय भन्दै मौकामा चौका हानिरहेका छन् । डिभी भर्नको लागी कुनै शुल्न तिर्न नपर्ने भएपनी चर्को शुल्क असुरलिरहेका छन् । अनलाईनमा पैसा तिर्नुपर्छ, ईन्टरनेट खर्च लाग्छ, कम्प्युटरमा लामो समय काम हुन्छ भन्दै चर्को शुल्य लिने गरेको पाईएको छ । त्यसो त डिभी भर्न इच्छुक मानिसहरुमा पनी एउटा ठुलो भ्रमले जरा गाडेको छ त्यो हो आफैले भर्न सकिन्न, त्यस्ता सस्थाहरुमा भरेका डिभी मात्रै मान्य हुन्छ, आदि ईत्यादी । त्यस्ता सोचाई र मानसिकता भ्रम मात्रै हो ।
नेपालका लागी अमेरिकन दुतावासले सघंसस्थाहरुले डिभीको नाममा पैसा असुल्ने काम गरेको भन्दै कारवहिको लागी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनेर चेतावनी दिईसकेको छ । यसवाट पनी के वुझ्न सकिन्छ आफैले घर तथा कार्यालयवाटै भरिएको डिभीले पनी उत्तिकै मान्यता पाउछ । तपाईसगँ कम्प्युटर र ईन्टनेटको पहुँच हुदाहुदै पनी पैसा तिरेरै डिभी भर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने वेकारमा पैसा खर्च गरिहरनुभएको छ । कसरी भर्ने त डिभी ?
यो पनी हेर्नुस् : तपाईलाई डिभी परेकै हो ? भिडियो हेर्नुस्
डिभी भर्नको लागी एक मात्र आधिकारीक बेवसाईट डिभीलट्री डटस्टेट डटजिओभी www.dvlottery.state.gov मा जान आवश्यक छ । यो साईटको पहिलो पेजमै धेरै जानकारी देख्न र पढ्न सकिन्छ । जस्तै कसरी डिभी भर्ने,कस्ता कुरामा होशियारी अपनाउने,फोटो, व्यक्तिगत विवरण के कस्तो हुनुपर्छ आदि ईत्यादी । अन्य जानकारी भर्न थाल्नुभन्दा पहिले खिचिएको फोटोमा ध्यान दिन आवश्यक छ । डिभिको लागी खिचिएको फोटो साधारण हुनुपर्छ । आकर्षण देखाउन फोटोशपवाट चम्काउने तथा फुलवुटा भर्ने काम भर्नुहुदैन भने व्याकग्राउण्ड सादा हुन आवश्यक छ । आफु जस्तो फोटोपनी त्यस्तै (नेचुरल) हुनुपर्छ । अनुहार र जिउको वनावट साथै उचाई, चौडाईको लागी यो स्केचवाट पनी प्रश्ट हुन सकिन्छ
फोटो तयार भईसकेपछि दोश्रो स्टेपमा जानु पर्ने हुन्छ ( Being entry) । विस्तृत वायोडाटा भर्नको लागी देखिएको पाचँ अग्रेजी अक्षर वक्समा टाईप गरी तेश्रो स्टेपमा जान सकिन्छ । तेश्रो स्टेपमा गईसकेपछि नाम ( अन्तिम,पहिलो विचको ), जन्ममिति (दिन,महिना,वर्ष) लिङ्ग (महिला/पुरुष ), जम्नेको ठाउँ, राष्ट्र टाईप गर्नुपर्ने ठाउँ र फोटो अपलोड गर्ने ठाउँ देखिनेछ । साथै फोन नम्वर,शहरको ठेगाना, पोष्ट र जिप कोड, शिक्षा,वैवाहिक अवस्था र लगायत अन्त्यमा ईमेल आईडी राखेर कन्टिन्यू बक्समा क्लिक सक्नपर्ने हुन्छ र सवै जानकारी सहि भएपछि अन्तिम ओके गर्नुपर्छ । अव तपाईले सजिलै डिभि भर्नुभयो । डिभी भरिसकेपछि प्रमाण स्वरुप तपाईले एउटा पेटमा सर्टिफिकेट देख्नुहुन्छ त्यसलाई ईन्टरनेट व्राउजर सहित सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भने एक प्रती प्रिन्ट गरेर हार्डकपी पनी सुरक्षित राख्दा राम्रो हुन्छ । तपाईले भर्नुभएको डिभीको नतिजा करिव ६ महिनापछि निस्कन्छ ।
यो पनी हेर्नुस्: डिभी चिठ्ठा सवैभन्दा वढी नेपालीलाई
डिभीको नतिजा डिभीलट्री डटस्टेट डटजिओभी –www.dvlottery.state.gov वाटै थाहा पाउन सकिन्छ । तर तपाईको ईमेल एकाण्टमा, वधाई छ तपाईले डिभी चिठ्ठा पाउन सफल हुनुभयो, जस्ता इमेलहरु आउन सक्छन् । साथै थप प्रक्रियाको लागी शुल्क तिर्नु पर्छ , त्यसपछि तपाई अमेरिका जान सक्नुहुन्छ जस्ता ईमेलले पनी झुक्काउन सक्छन् । ती त्यस्ता प्रकारका ईमेल देखेर मख्ख नपर्नुस् ती सवै ठ्ग्ने धन्दा मात्र हुन् । त्यस्ता प्रलोभनमा पर्नु भनेको ठगिनु हो । विकसोन्मुख देशका नागरिकहरु अशिक्षित हुन्छन्, झुक्काएर ठग्न सजिलो हुन्छ भनेरपनी धेरै प्रपोगाण्डा सहितको ईमेल आएमा त्यस्ता इमेल डिजिल गर्न अथवा नेपालका लागी अमेरिकन दुतावासको ईमेल आईडी ( usembktm@state.gov ) मा फरवार्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ ।